China oluludaka Pump Materials Ukukhetha mveliso kunye nabathengisi | YAAO
Kwimpompo ye-slurry impeller kunye nangaphakathi kwe-casing zihlala zichanekile kwi-slurry kwaye kufuneka zikhuselwe ngokufanelekileyo ngokuchasene nokunxiba.
"Ukukhetha izinto ezinqwenelekayo kunye nokufakwa kwisamente kubalulekile njengokukhetha impompo ngokwayo!"
Kukho iimeko ezintathu ezahlukeneyo ezenza ukunxiba kwimpompo ye-slurry:
Zintathu iindidi eziphambili zokukrala:
Kwiimpompo oluludaka siye ikakhulu besila kunye noxinzelelo ephantsi lingonakali.
Ireyithi ye-Abrasion ixhomekeke kubungakanani bamasuntswana kunye nobulukhuni.
Abrasion yenzeka kuphela kwiindawo ezimbini kwimpompo ye-slurry:
1.Phakathi impeller kunye owongozelelweyo yokumisa.
2. Phakathi komkhono weshafti kunye nokupakisha okumileyo.
Oku kukunxiba okubalaseleyo kwiimpompo zetsimbi. Isizathu kukuba amasuntswana kwi-slurry abetha umphezulu womhlaba kwii-engile ezahlukeneyo.
Ukwehla kukhukuliseko kuxhomekeke kakhulu kwindlela esebenza ngayo impompo. Ukunxiba ukhukuliseko, ngokubanzi, kubuncinane kwinqanaba le-BEP ﬂ ow, kwaye lonyuka ngokuhamba kancinci kunye nokuhamba okuphezulu.
Ngenxa yezizathu ezingaqondakali kakuhle, ukhukuliseko lomhlaba lunokunyuka kakhulu ukuba impompo ivumelekile ukuba isebenze "erhona"; Oko kukuthi, ukuthatha umoya kumbhobho wokungena.
Kuye kwacetyiswa ukuba oku kungabangelwa kukuvalwa komzimba, ngenxa yompompo ongcangcazelayo njengoko umoya usihla phezu kwawo. Oku kunjalo, nangona kunjalo, kunzima ukwamkela njengamaqamza omoya ngokubanzi acinezela i-cavitation ngokuhamba ukuya kuflaya imingxunya yomphunga.
Zintathu iintlobo zokukhukuliseka komhlaba:
Iziphumo zokhukuliseko kumacandelo empompo:
Isinyanzelo sixhomekeke kwimpembelelo yokunxiba (ephezulu kunye nezantsi) ikakhulu kwiliso, kwicala eligudileyo (A), xa i-turns ow ijika i-90 °. Kumda ophambili we-vane (B).
Isilayidi esilayidayo kunye nefuthe elisezantsi le-angular lwenzeka ecaleni kweenqanawa phakathi kwe-impeller shrouds (C).
I-liners esecaleni (ii-liners kunye ne-back liners)
I-liners esecaleni zixhomekeke kwisilayidi esityibilikayo kunye nokutyumza kunye nokugaya ukungonakali.
I-volute ixhomekeke kwimpembelelo yokunxiba kumanzi asikiweyo. Ibhedi yokutyibilika kunye nokunxiba okuphantsi kwe-angular kuyenzeka kuyo yonke ivolthi.
Ukubola (kunye nohlaselo lweekhemikhali) lwamalungu emanzi kwiSlurry Pump yinto enzima kuzo zombini izinto zentsimbi kunye neelastomer.
Ukufumana isikhokelo, iitafile zokumelana neekhemikhali zesinyithi kunye nezinto ze-elastomer zinikwe ngokulandelayo nakwicandelo leetafile zokumelana nemichiza.
Ubukhulu. Icebo lokuThengisa
Ukukhawuleza (m / s)
Elona xesha liphezulu lenkonzo. (OC)
Ngokuqhubekayo ngamanye amaxesha
(-50) ukuya kuma-65 100
Ukunxiba ukhuseleko - ziziphi iindlela onokukhetha kuzo?
Kukho ezinye iindlela eziphambili ekukhetheni ukunxiba ukhuseleko lweempompo zentsimbi:
Ukunyanzeliswa kunye nokufakwa kwezinto kwi-Hard Metal kwii-alloys ezahlukeneyo zentsimbi emhlophe kunye nentsimbi.
Ukunyanzeliswa kwii-elastomers kunye ne-casing ekhuselweyo yi-elastomer liners. Ii-Elastomers zihlala zirabha kwiimpawu ezahlukeneyo okanye kwi-polyurethane.
Umdibaniso wesinyanzelo sesinyithi esomeleleyo kunye neelastomer-ngaphakathi.
Ukukhethwa kwezinto zokunxiba
Ukukhethwa kweenxalenye zokunxiba kukulingana phakathi kokumelana nokunxiba kunye neendleko zamalungu okunxiba.
Zimbini iindlela zokumelana nokunxiba:
Izinto zokunxiba kuya kuba nzima ukuxhathisa isenzo sokusika sokuthintela ukutya okuqinileyo! okanye Izinto zokunxiba kufuneka zelulwe ukuze zikwazi ukufunxa ukothuka kunye nokuphindaphinda kwamasuntswana!
Ukukhethwa kweenxalenye zokunxiba kuhlala kusekwe kwezi paramitha zilandelayo:
Ubungakanani obuqinileyo (i-SG eqinileyo, imilo kunye nobulukhuni)
i-pH kunye neekhemikhali